Nsɛmmisa a Efi Akenkanfo Hɔ—July 2021
KENKAN WƆ Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur American Sign Language Amharic Amis Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chiga Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fante Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German German Sign Language Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guatemalan Sign Language Guianese Creole Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Itsekiri Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kanyok Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikongo Kikongo ya Leta Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kituba Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Lari Latvian Lendu Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Makhuwa-Shirima Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Min Nan (Taiwan) Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Ngbandi (Northern) Nias Nicobarese Norwegian Nsenga (Mozambique) Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Phimbi Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Romania) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Songomeno South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Taabwa Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Tewe Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Sɛn na ɛsɛ sɛ Yehowa Adansefo bu Intanɛt so a wɔfa hwehwɛ okunu anaa ɔyere?
Yehowa pɛ sɛ ɔbea ne ɔbarima ware a, wɔn ani gye, wɔn aware no sɔ, na ɛtena hɔ daa. (Mat. 19:4-6) Sɛ wopɛ sɛ woware a, wobɛyɛ dɛn anya okunu pa anaa ɔyere pa? Esiane sɛ Yehowa na ɔbɔɔ yɛn nti, onim nea yɛyɛ a ɛbɛma yɛanya obi a ɔfata aware no ama yɛn aware asɔ. Ɛno nti, sɛ wode nnyinasosɛm a ɔde ama yɛn no yɛ adwuma a, ɛbɛkɔ yiye ama wo. Ma yɛnhwɛ saa nnyinasosɛm no bi.
Nea edi kan, ɛsɛ sɛ yɛte asɛm a wɔkyerɛw faa nnipa ho yi ase paa. Ɛne sɛ: “Koma yɛ ɔdaadaafo sen biribiara, na ne ho yɛ ahometew.” (Yer. 17:9) Sɛ ɔbea ne ɔbarima pɛ sɛ wɔware, na wɔpɛ sɛ wohu wɔn ho yiye nti wofi ase bɔ a, wobetumi anya akɔnnɔ ama wɔn ho bere a wɔn ani nna. Ɛkɔba saa a, wobetumi asisi gyinae a nyansa nnim. Sɛ ɔbea ne ɔbarima di wɔn akɔnnɔ nko ara akyi ware a, mpɛn pii no ɛma wɔn nsa si fam. (Mmeb. 28:26) Sɛ afei ara na ɔbea ne ɔbarima bi ahyia a wɔpɛ sɛ wohu wɔn ho yiye a, nyansa nnim sɛ wɔbɛbɔ ɔdɔ ho nkɔmmɔ akɔ akyiri. Afei nso, nyansa nnim sɛ wɔbɛhyehyɛ bɔ ansa na wɔahu wɔn ho yiye.
Mmebusɛm 22:3 ka sɛ: “Onyansafo hu asiane, na ɔde ne ho sie, na ogyimifo de, ɛno ara ne sɛ ɔrekɔ, na otwa so aba.” Sɛ obi pɛ sɛ ɔfa Intanɛt so hwehwɛ okunu anaa ɔyere a, asiane bɛn na ebetumi ato no? Awerɛhosɛm ne sɛ, ebinom hyiaa nkurɔfo wɔ Intanɛt so a na anka wɔpɛ sɛ wɔware wɔn, nanso ewiee ase no, wohui sɛ nsɛm a na saa nkurɔfo no akeka akyerɛ wɔn no nyinaa yɛ nnaadaa. Afei nso, ebinom ayɛ wɔn ho ohintaduakyi wɔ Intanɛt so, na wɔdaadaa nkurɔfo a wɔn ani nna hɔ wia wɔn sika. Ɛtɔ da a, nnipabɔnefo a ɛte saa no bi mpo ka sɛ wɔyɛ Adansefo.
Hwɛ asiane foforo nso. Intanɛt so mmeae bi nso wɔ hɔ a, wɔnam akontaabu soronko bi so na ɛkyerɛ ɔbea ne ɔbarima ko a wobetumi aware wɔn ho. Nanso adanse biara nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ akontaabu a ɛte saa yɛ adwuma. Biribi a ɛho hia paa te sɛ ɔbarima anaa ɔbea a obi bɛware no no, wohwɛ a, nyansa wom sɛ yebegyina akontaabu bi a nnipa ahyehyɛ so asi ho gyinae anaa? Sɛnea Bible nnyinasosɛm yɛ adwuma no, wobɛyɛ dɛn de akontaabu atoto ho ma ayɛ yiye?—Mmeb. 1:7; 3:5-7.
Nnyinasosɛm bi a ɛwɔ Mmebusɛm 14:15 ka sɛ: “Ogyimifo gye asɛm biara di, na onyansafo de, anammɔn biara a obetu no, ɔhwɛ no yiye.” Ansa na wubesi gyinae sɛ wobɛware obi no, ɛsɛ sɛ wuhu no yiye. Nanso sɛ wuhyia nipa no wɔ Intanɛt so a, ɛbɛyɛ den sɛ wubehu no yiye. Sɛ wode wo ho nsɛm sɛnde no, na ɔno nso de ne de sɛnde wo, na mode bere pii mpo bɔ nkɔmmɔ wɔ Intanɛt so a, wubetumi aka paa sɛ wunim onii no yiye? Ebinom a na ɛyɛ wɔn sɛ wɔahyia wɔn dɔfo no, bere a afei de wohyiae anim ne anim no, wɔn ho dwiriw wɔn papaapa.
Odwontofo no kaa sɛ: “Me ne nkontompofo mmɔ, na metwe me ho fi nyaatwomfo ho.” (Dw. 26:4) Nnipa bebree adwene yɛ wɔn sɛ, wɔn ho nsɛm a wɔde gu Intanɛt so de hwehwɛ okunu anaa ɔyere no, sɛ wodi atoro wom sɛnea ɛbɛyɛ a nkurɔfo ani begye wɔn ho a, ɛnyɛ hwee. Sɛ wɔne nkurɔfo rebɔ nkɔmmɔ wɔ Intanɛt so a, subammɔne a wɔwɔ no, wobetumi de asie anaa wɔremma obiara nhu. Sɛ obi ka sɛ ɔyɛ Yehowa Danseni mpo a, wobɛyɛ dɛn ahu sɛ ɛyɛ ampa sɛ wabɔ asu? Ɔyɛ Kristoni a ne ho akokwaw? Ɔne Yehowa adamfofa te sɛn? Anuanom bu no wɔ asafo no mu? Anaa ebetumi aba sɛ ɔyɛ nea ɛmfata anaa ɔbɔ “fekubɔne” mpo? (1 Kor. 15:33; 2 Tim. 2:20, 21) Bible nso ma no kwan sɛ obetumi aware anaa? Weinom yɛ biribi a ɛho hia sɛ wuhu. Nanso sɛ Adansefo a wonim nipa no yiye ammoa wo a, ɛbɛyɛ den sɛ wubehu. (Mmeb. 15:22) Afei nso, obi a ɔde nokwaredi resom Yehowa de, ɛremma n’adwene mu mpo sɛ ɔnkɔware obi a onnye nni na ɔne no “ntwe kɔndua koro.”—2 Kor. 6:14; 1 Kor. 7:39.
Yɛahu sɛ, sɛ obi pɛ sɛ ɔfa Intanɛt so hwehwɛ okunu anaa ɔyere a, asiane a ɛwom no dɔɔso. Nanso anigyesɛm ne sɛ akwampa wɔ hɔ a obi betumi afa so anya okunu anaa ɔyere pa. Wobɛyɛ dɛn na woanya obi a ɔfata aware no? Sɛ yetumi hyiam wɔ Ahenni Asa so ne Nhyiam Asa so yɛ nhyiam anaa sɛ yehyia wɔ mmeae afoforo nso a, Yehowa Adansefo tumi hu wɔn ho anim ne anim.
Sɛ munya bere ma mo ho a, nkakrankakra mubehu sɛ botae a esisi mo ani so ne nea obiara ani gye ho no, ɛne ne yɔnko de hyia anaa
Nanso sɛ yentumi nhyiam anim ne anim sɛnea ɛrekɔ so wɔ COVID-19 nsanyare bere yi mu no a, yɛfa ɛlɛtrɔnik mfiri so yɛ asafo nhyiam. Ɛno ma Adansefo a wɔnwaree no nya kwan ne wɔn ho hyia. Ɛba saa a, onii a wɔn ani gye ne ho no, wotumi hu sɛnea ɔma mmuae ne sɛnea ɔne Onyankopɔn ntam te. (1 Tim. 6:11, 12) Yɛpɔn adesua nso a, wobetumi ahyiam wɔ breakout room abɔ nkɔmmɔ de ahu wɔn ho yiye. Afei nso, Adansefo no betumi ahyiam wɔ ɛlɛtrɔnik mfiri so agye wɔn ani. Saa bere no, sɛ obi wom a w’ani gye ne ho a, wubetumi de w’ani ato fam ahwɛ sɛnea ɔne afoforo bɔ, na ebetumi ama woahu ne suban ankasa nso. (1 Pet. 3:4) Nkakrankakra, sɛ muhu mo ho yiye a, mubetumi ahwɛ sɛ botae a esisi mo ani so ne nea obiara ani gye ho no, ɛne ne yɔnko de hyia anaa. Ɛno bɛma moahu sɛ ɛsɛ sɛ moware anaa ɛnsɛ sɛ moware.
Sɛ wɔn a wɔnwaree de Bible nnyinasosɛm yɛ adwuma de hwehwɛ ɔyere anaa okunu a, ebetumi ama wɔn aware asɔ. Ɛbɛma wɔahu sɛ ɛbɛ yi yɛ nokware. Ɛka sɛ: “Nea wanya ɔyere pa (anaa okunu pa) no, wanya adepa. Na Yehowa begye no atom.”—Mmeb. 18:22.
w21 July kr. 30-31